Musaveni oo Dhex Dhexaadinaya Xasan Shiikh iyo Uhuro Kenyatta
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kamala ee dalka Ugandha ayaa sheegaya in Madaxweynaha Uganda Musavini uu u kala dab qaadayo Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo Madaxweynaha Kenya Uhuro Kenyatta kuwaa oo si aad ah isugu qabtay Xaaladda Magaalada Kismaayo. Iyo qaabka Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah Amisom ay uga hawl galayaan Soomaaliya kaddib markii Dagaalo dhawaan ka dhacay Kismaayo ay garab siiyeen Ciidamadii Raaskaambooni oo uu hoggaaminayay Axmed Madoobe.
Inta aan la isku keenin labada Madaxweyne ayaa Madaxweynaha Uganda Mosavini waxa uu Magaalada Nairobi kulan kula qaatay Madaxweynaha Dalka Kenya Kenyatta kuwaa oo ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya iyo Muranka ka taagan Magaalada Kismaayo, sidoo kale waxa uu madaxweynaha Ugandha Magaalada Kampala kulan kula qaatay MadaxweynahaSoomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud kuwaa oo ka wada hadlay Xaaladda Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose kaddib markii Dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ay isku fahmi waayeen qaabka loo wajahayo arrimaha Kismaayo.
Madaxweynaha Uganda ayaa waxa uu doonayaa in uu si ka fool ka fool isku soo hor fariisiyo labada dhinac marka uu dhamaado Shirka Madaxda Ciidamada ay ka joogaan Dalka Soomaaliya oo ka furmaya Magaalada Kampala iyadoo lagu waramay in kulankaas uu ka qayb gali doono Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad u daneynaya in la so oaf jaro dagaalada ka taagan Magaalada Kismaayo oo dhawaantan dagaal dad fara badani ku dhinteen uu halkaas ka dhacay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa uu doonayaa in Mamulka loo samaynayo Gobolada Jubbooyina uu noqdo mid marka hore ka yimaada dhinaca Dawladda si loo helo Maamul ay ku Mideysan yihiin dhammaan Beelaha wada dega Gobolada Jubbooyinka , dhinaca kale Maamulka Axmed Madoobe ayaa isagu ka soo hor jeeda Maamul ka yimaada dhinaca Dawladda Federaalka Soomaaliya isagoo ku adkaysanaya in Maamulka haatan halkaa ka jira ay u dhan yihiin Beelaha halkaa wada dega, balse arki doonee waxa ka soo baxa kulanka uu Garwadeenka ka yahay Muzaveni oo lagu wado in ay wada yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Kenya.
Kampala, 03 August 2013 - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud iyo wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda si ay uga qeybgalaan shirka waddamada ay ciidamada AMISOM ka joogaan Soomaaliya. Madaxweynaha waxaa wafdigiisa ka mid ahaa Wasiirka Difaaca, Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada, xildhibaanno, diplomaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale. Waxaa sidoo kale Kampala ku sugnaa Wasiirka Arrimaha Dibedda ahna Ra’iisul Wasaare Ku-xigeen oo shirkii heer wasiir maanta ka qeybgashay.
Maanta makhribkii ayuu madaxweyne Xasan Sheekh kulan gaar ah la qaadan doonaa dhigiisa Madaxweyne Yuweri Musaveni oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal, ciidamada AMISOM iyo shirka waddamada ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya oo maalinta berri ah ka dhici doono Kampala oo uu shir guddoomin doono Madaxweynaha dalka Uganda.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu shirka berry khudbad taariikhi ah ka jeedin doono oo uu uga mahadcelinayo waddamada ciidamada u soo direy Soomaaliya oo dhiigooda iyo maalkooda u huray sidii ay Soomaaliya u noqon laheyd dal nabad ah. Madaxweynahu waxuu ka warbixin doonaa horumarka ballaaran oo ay dowladdu ku tallaabsatay gaar ahaan dhanka dagaalka lagula jiro kooxaha Al-Shabaab, tababaradda joogtada ah ee ciidamada Soomaaliya, iyo dib u habeynta socota ee hay’adaha amniga.